Serivisy - Zhongshan Xingyong Machinery Co., Ltd.
Misaotra nitsidika ny tranokalanay, izay nohavaozina sy nohatsaraina tsikelikely, miarahaba antsika rehetra misy soso-kevitra sy hevitra na oviana na oviana.
Ny ankamaroan'ny milina dia natao hanafatra, azafady mifandraisa sy manamarina amin'ny mpivarotra anay amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny mailaka / telefaona momba ny fitaovana fonosana, ny lanjany, ny karazana kitapo sy ny habeny, sns.
hanamafy mazava tsara ny fepetra takian'ny mpanjifa izahay alohan'ny hanomezana soso-kevitra ho an'ny mpanjifa mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny takinao ny soso-kevitra omenay anao.Dia hanome anao teny nindramina tsara.
Aorian'ny fametrahana ny baiko any amin'ny departemantan'ny vokatray dia hanaraka tsara ny baikonao izahay ary hampahafantatra anao ny sata famokarana.Hanome anao sary izahay.
1. Raha misy olana sy tsy mety amin'ny milinanao, dia hanome anao valiny haingana sy vahaolana izahay rehefa mahazo ny vaovao avy aminao.Hiezaka izahay amin'ny fotoana voalohany indrindra.
2. Misy mpiasan'ny serivisy eo an-toerana, mba hanohanana bebe kokoa ny mpampiasa farany eo an-toerana, dia afaka mandamina ny mpandraharaha eo an-toerana izahay mba hanao fametrahana, komisiona ary fiofanana.Mazava ho azy, raha ilaina, dia afaka mandamina ny miaramilanay izahay mba hanompo anao araka ny fenitry ny serivisy any ampitan-dranomasina.
3. Izahay miantoka ny milina iray manontolo mandritra ny 12 volana, afa-tsy ny ampahany marefo, manomboka amin'ny andro nandefasana ny milina miampy iray volana.
4. Ao anatin'ny garantie, dia azo soloina maimaim-poana ny ampahany mekanika sy elektronika.Ny fahasimbana rehetra vokatry ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy dia tsy tafiditra ao.Ny mpanjifa dia tsy maintsy mamerina ny kojakoja simba tsy mihoatra ny iray volana.
5. Rehefa tapitra ny fotoanan'ny garantie dia tsy omena kojakoja maimaim-poana intsony.
6. Hanome anao fanohanana ara-teknika mandritra ny androm-piainany izahay
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Belt Conveyor, Skirt Belt Conveyor, Fonosana Belt Conveyor, Stainless Steel Screw Conveyor, Tubular Belt Conveyor, Belt Conveyor elektrika, Ny vokatra rehetra